In badan oo naga mid ah wax ka badan hal qalab smart hadda maalmood ah, iPads mid iyaga ka mid ah. users iPad guud ahaan walaacsan ayuuna u soo dhaadhacay ay iPad muddo waqti go'an ka dib. Tani waxay sabab u noqon kara sababaha qaar ka mid ah kuwaas oo dadka kale user la xiriira waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay qaar ka mid ah qalabka ama software gaba kala duwan. Qaar ka mid ah Sababaha ugu caamsan ee ay hoos u of iPad ah waxaa ka mid ah:
macruufka macruufka updates- updates, waxay keeni kartaa qaab dusha ku keeni karo qalabka si aad yarayso. Mararka qaarkood, ugu update cusub macruufka noqdo aad u badan oo ah culays u processor ah oo gaboobay oo halkan waxa ay caanuhu qalabka.
Apps- Apps kharash dhan qalabka ay ka mid yihiin iPads, nolosha batteriga iyo waxqabadka. Ku xiridda farabadan oo Chine in aad laga yaabaa in aan xitaa la isticmaalayo ayaa saamayn xun ma aha oo kaliya on xusuusta reer iPad, laakiin ay qaab guud ahaan.
Battery mararka degradation-, nabaad-qabadka waxaa lagugu leeyahay oo kaliya in ay xaqiiqda ah in batariga ee iPad mar dambe ma ay xajin karaan qadarka processing in uu leeyahay in ay la tacaalaan.
Memory- Haddii iPad ayaa ordi ka mid ah xasuusta ama qarka u saaran inay soo baxeen xusuus, waxa ay hoos u dhigi doono iyo waxqabadka muuqata xaqiro doonaa.
Sidee si ay u kordhiyaan xawaaraha iPad Wi-Fi
Decrease ee xawaaraha Wi-Fi aad iPad sabab u noqon kara waxyaabo badan oo dhan arrimaha. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah:
Shaqo gaba Router- Hubi aad router loogu aan caadi ahayn. Waxaa Guuleysatey iyo madax ka badan si ay u YouTube ay u fiiriyaan Casharrada qaar ka mid ah oo ku saabsan mawduuca.
Signal Fara-dacwadda Qaar ka mid ah xaaladaha ilaalinta waxaa loo dhisay ka mid ah qalabka in masuul ka Wi-Fi faragelinta signal taas oo keenta in a gaabis ah xawaaraha Wi-Fi yihiin. Iska saar kiiska iyo hubi haddii ay keentey in horumar ah ee xawaaraha Wi-Fi.
Qalad DNS Settings- Mararka qaarkood goobaha DNS ayaa ka mas'uul ah gaabis ah xawaaraha Wi-Fi. Calan u DNS gacanta on your iPad si ay u xaliyaan dhibaatada. Waayo, tan u tagaan oo ay u Settings Wi-Fi. Tubada ee "i" icon midigta ee magaca shabakadda ee Wi-Fi. Hoos si ay u helaan "DNS" iyo sidoo kale gali cinwaanka "8.8.8.8; 8.8.4.4 "," 208.67.222.222 "ama" 208.67.220.220 "oo aan ku saasbsan. Guuleysatey ku-Wi Fi ah ee aad taleefan.
Sida loo hagaajiyo qaab iPad
iPad ee waxqabadka guud loo horumarin karaa adigoo raacaya tallaabooyinkan guud:
CUSBOONAYSIINTA in firmware ugu dambeeyay.
Uninstalling barnaamijyadooda la isticmaalin.
Sii daynta ilaa meel ku xasuusta by takhalusaya fariin jir ah oo ay u wareegaayo photos jir iyo videos in aad laptop ama computer oo bilaash ah ilaa meel xusuusta.
La baneeyo khasnado browser.
Deminta adeega goobta.
Hagaajinta iPad-qabadka la isticmaalayo Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser waa aalad garasha in sameeya oo dhan lagu nadiifiyo ee qalab aad waayo hal click. Wondershare SafeEraser si buuxda u la jaan qaada la Lugood 12.1, macruufka 9.0, iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus waxaa laga heli karaa sida lacag la'aan ah aad maxkamadda soddon maalin. Waxay qaadataa daryeelka dhammaan faylasha junk laga yaabo in la joogo in aad nidaamka unwantedly iyo tirtirtaa dhammaan faylasha in la qarin karo iyo kor u bannaan in xusuusta. Wondershare SafeEraser waa la jaan qaada labada Windows iyo MAC ka hawlgala nidaamyada.
Wondershare SafeEraser ayaa sifooyinka soo socda:
Xogta gaarka ah oo cad
Masixi qalab joogto ah
Junk File Clear iyo uninstall Apps
Si joogto ah masixi 'Durba masaxay Files'
Cadaadi Photos ay dib u hanato Kaydinta u Device
Si aad u sii daayo meel dheeraad ah oo aad ku iPad isticmaalaya Wondershare SafeErase, download iyo rakibi SafeEraser Wondershare si aad u computer oo laptop. Sug rakibo si ay u buuxiyaan oo aan bilowno codsiga on your computer ama laptop. Connect aad iPad in computer ama laptop taasi oo ka cable USB ah oo sii wadi sida hoos ku faray.
Hel "Nadiifinta 1-Click" ikhtiyaarka ka furmo suuqa hoose.
Hit ah "1-Guji Nadiifinta" button iyo Wondershare SafeEraser samayn doono baaritaan deg deg ah qalab aad u aad kuu sheegaysa wadarta guud ee files junk joogo ee iPad mar scan ku dhamaato. Dooro files in aad rabto in laga takhaluso adigoo sanduuqyada ay jeeg baahisey. Guji "nadiifinta" in ay sii wadaan.
Wondershare SafeEraser muujin doonaa natiijada nadiifinta markii ay samaynayaan nadiifinta files junk ka iPad.
Hel "Photo hawadda" ikhtiyaarka ka furmo suuqa hoose iyo guji ku yaal. Wondershare SafeEraser markaas kuu bilaabmayaa baar iPad sawirada ay u baahan tahay in lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC.
Marka scan la dhammeeyo, Wondershare SafeEraser muujin doonaa oo dhan sawiradaada. All oo ka mid ah waxaa la baari doonaa by default taas oo macnaheedu yahay in ay default oo dhan oo iyaga ka mid la Tifaftirayaasha doonaa. Haddii aadan rabin oo dhan oo iyaga ka mid in lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC, aad si fudud u uncheck kartaa qaar ka mid ah. Guji "Start" marka aad dhamaysid.
Ka hor inta dhab ahaan laga bilaabo ku cadaadisaa sawirada, waxaad sidoo kale riixi kartaa Menu ugu weyn iyo Settings ka geeska sare ee midigta ah barnaamijka, dooro karriin in gurmad aad sawiro asalka ah. Bixi waddo haboon oo dooro "Okay".
Habka riixo ayaa bilaaban doona. Marka la dhameeyo, Wondershare SafeEraser muujin doonaa natiijada riixo aad ee. Si sahlan Waxaad awoodi doontaa in ay aragto farqiga u dhexeeya meesha bannaan ee in la isticmaalo sawiro ka hor iyo ka dib riixo ah.
> Resource > iPad > Sida loo hagaajiyo iPad Speed